किंगको SARCOIDOSIS प्रश्न
राजाको सरकोडोसिस प्रश्नावली (केएसक्यू) राजाको कलेज लन्डन द्वारा विकास गरिएको एक अनलाइन स्वास्थ्य उपाय हो र सरकोडोसिसके द्वारा डिजिटल। केएसक्यूले चाँडै आकलन गर्छ कि कसरी सरकोडोसिस रोगी स्वास्थ्यलाई असर गर्दैछ। केएसक्यूको बारेमा थप पढ्नुहोस् र तल सर्भर लिनुहोस्।
सर्कोडोसिसले रोगीहरूलाई फरक फरक पार्छ, विशेष गरी समयको तुलनामा। त्यसैले यो कहिलेकाहिँ परामर्शदाताहरूको लागि सर्चोइडोसिसले उनीहरूको मरीजको स्वास्थ्य र जीवनको गुणस्तरलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने थाहा पाउन कठिन छ। SarcoidosisUK ले आफ्नो KSQ अनलाइन राख्न को लागि किंग्स कलेज अस्पताल संग साझेदारी गरेको छ। यो एक छिटो र सजिलो, आत्म-प्रबन्धित स्वास्थ्य प्रश्नावली हो जुन विशेष रूपमा sarcoidosis रोगीहरूको लागि डिजाइन गरियो। यस मापले रोगीको स्वास्थ्य ट्र्याक गर्न र उपचार र हेरविचार योजनाहरूको बारेमा सल्लाहकारसँग सम्पर्क सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। SarcoidosisUK को सिफारिश हरेक sarcoidosis रोगी प्रत्येक परामर्श अघि KSQ पूरा र परिणामहरु लाई उनको सल्लाहकार संग छलफल गर्न को लागी।
राजाको सरकोडोसिस प्रश्नावली (KSQ) अब अनलाइन उपलब्ध छ। यहाँ जानुहोस् वा एसएसक्यू पूरा गर्नको लागि छविमा क्लिक गर्नुहोस्
तपाईं KSQ को बारेमा थप पढ्न सक्नुहुन्छ र कसरी यसलाई तल विकास गरिएको थियो।
केएसक्यू के हो?
KSQ एक नि: शुल्क, अनलाइन प्रश्नावली छ कि sarcoidosis रोगियों द्वारा भरिएको छ। प्रश्नावली लगभग 10 मिनेट लाग्छ र5खण्डमा विभाजित हुन्छ; सामान्य स्वास्थ्य स्थिति, फेफड़ों, औषधि, छाला र आँखा। त्यहाँ कुल29 प्रश्नहरू छन्, तथापि केही प्रश्नहरू उत्तर नहुन सक्छ (सगरकोडोस प्रभावित प्रकारको आधारमा)। प्रत्येक प्रश्न मस्तिष्कले उनीहरूलाई आफ्नो जीवनका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा कसरी महसुस गर्न दर गर्दछ भनेर सोध्छन्, उदाहरणका लागि तिनीहरूले कत्तिको पीडामा छन् वा रोजगारीका कामहरू कति कठिन हुन्छन्। जानकारी प्रदान गोपनीय छ। नतीजाहरू 1-100 बीचको संख्यालाई उच्च स्वास्थ्यको रूपमा उच्च संख्याको साथ दिएका छन्।
KSQ किन उपयोगी छ?
केएसक्यूले चाँडै असर sarcoidosis एक व्यक्तिको जीवनमा रहेको आकलन गर्दछ। यस जानकारी उपयोगी छ त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन्:
हेरविचार: KSQ परिणामहरू सल्लाहकार र रोगीहरूले आफ्नो sarcoidosis को लागि सबैभन्दा राम्रो हेरविचार योजना विकास गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
परामर्श: के KSQ ले स्वास्थ्य समस्याहरूलाई प्रत्येक व्यक्तिको लागि महत्त्वपूर्ण पहिचान गर्दछ। त्यसकारण परिणामहरू परामर्शको लागि उपयोगी सुरूवात बिन्दु प्रदान गर्दछ - डाक्टरले चाँडै समस्या समस्याहरु पहिचान गर्न सक्छन् र छलफलहरु फोकस गर्न सक्छन्।
उपचार: यदि नयाँ उपचार गर्नु अघि र पछि दुबै रोगी द्वारा लिइएको हो, KSQ ले यो उपचारको आधारभूत उपाय दिन सक्छ।
रोगीहरू KSQ कसरी प्रयोग गर्छन् र परिणामहरू व्याख्या गर्छन्?
परामर्शदाताहरूले KSQ पूर्ण गर्दा रोगीहरूलाई सल्लाह दिनुपर्छ - यो सामान्यतया परामर्शमा भाग लिनु पर्दछ, सम्भवतः प्रतीक्षा कक्षमा। यद्यपि बिरामीहरूले सर्वेक्षण पूरा गर्न सक्छन् कुनै पनि समयमा र धेरै पटक तिनीहरू जस्तै। उदाहरणका लागि रोगीहरूले एसएक्यू ले प्रति महिना एक पटक कसरी सरोकोडोसिसलाई उनीहरूको स्वास्थ्यलाई असर पारेको छ भनेर ट्रयाक गर्न सक्छ।
परिणाम सर्भरको अन्तमा स्क्रिनमा प्रदर्शन गरिन्छ। यसबाहेक त्यहाँ यी परिणामहरूको लागि रोगी र / वा उनीहरूको परामर्शदातालाई इमेल गर्न विकल्प छ। परिणामहरू प्रत्येक सेकेन्डको लागि 1 र 100 बीचको उच्च संख्याको साथमा राम्रो स्वास्थ्यको संकेत गर्दछ।
केएसक्यू कसरी विकसित भयो?
केएसक्यू 2012 मा लन्डनको किंग स्कुल अस्पतालमा एक टोलीले विकसित गरेको थियो प्रोफुरर बिरिङ, राजाको सल्लाहकार मा परामर्शदाता श्वसन चिकित्सक र बौद्धिक फेफड़ों को रोग। तपाईं तल मेडिकल जर्नल मा माप को विकास र प्रमाण को बारे मा अधिक पढ्न सक्नुहुन्छ. SarcoidosisUK ले 2018 मा KSQ अनलाइनलाई स्थानान्तरण गर्यो - यो डिजिटल संस्करण एक अधिक सुविधाजनक र व्यापक रूपमा उपलब्ध उपकरण हो, यो रोगी र स्वास्थ्य सेवाका लागि अधिक उपयोगी बनाउने।
पटेल, एएस, सिएर्ट, आरजे, क्रीमर, डी, लर्किन, जी, महर, टीएम, रेन्जोन, ईए, ... र बेरिंग, एसएस (2012)। स्वास्थ्य स्थिति को मूल्यांकन को लागि राजा को सरकोडोसिस प्रश्नावली को विकास र मान्यता। थोरैक्स, थोरक्सजल -2011।